Vondrona Afrikanina - Eraopeanina : Hanampy tosika ny tanora -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Afrikanina – Eraopeanina : Hanampy tosika ny tanora
30/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fanomezana vahana ny tanora ho lasa mpandraharaha tsy miankin-doha, mba ho fampivoarana ny fireneny sy ho fitsinjovana ny ho avin’izy ireo, no tanjon’ny fihaonana an-tampony faha-5n’ ny vondrona eraopeana sy vondrona afrikanina, notontosaina nanomboka omaly tany Cote d’Ivoire. Mandray anjara feno amin’izany i Madagasikara, ka ny filoha Hery Rajaonarimampianina no mitarika ireo delegasiona malagasy any an-toerana manatrika an’izany. Voakasik’ity lohahevitry ny fihaonana an-tampony ity moa isika eto Madagasikara satria dia ny 64 isan-jaton’ny mponina eto dia tanora.
Ny tanora tokoa no ho avin’ny kaontinanta, ka mila homena tosika. Isan’ny tosika omena azy amin’izany ny fanampiana azy ahafahany manangana orinasa ho azy, ahafahany mitady vola ho azy manokana.
Ankoatra ny maha fihaonambe azy moa, dia fotoana iray ahafahan’ny samy firenena mampivelatra ny fifandraisana iraisam-pirenena koa ny tahaka izao. Ny omaly maraina, dia nisy ny fihaonan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny Lituanie, ingahy Linas Linkevicius. Niompana tamin’ny fampivelarana ny ara-tsosialy sy ny ara-diplaomatika, ary ny ara-toekarena ny fihaonana. Anio moa no hamoaka fehin-kevitra, momba ny fihaonambe ny mpizaika.
Firenena 87 avy amin’ireo kaontinanta roa no mpandray anjara. Nandray fitenenana voalohany tamin’ny fanokafana omaly ny filohan’ny Côte d’Ivoire sy ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana, ary ny filohan’ny kaomision’ny vondrona afrikanina sy eraopeanina.